. ခြေလှမ်းဦး များနှင့် ကခုန်ခြင်း ” ခြောက်” – ပါဝါ (18) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
History » . ခြေလှမ်းဦး များနှင့် ကခုန်ခြင်း ” ခြောက်” – ပါဝါ (18)	5
. ခြေလှမ်းဦး များနှင့် ကခုန်ခြင်း ” ခြောက်” – ပါဝါ (18)
Posted by မြစပဲရိုး on Jul 10, 2015 in History |5comments
ဒီတစ်ခါ နှိုက် လိုက်တာ နံပါတ် ၁၈ တဲ့။
ဇီကလေး ရဲ့ စာရင်းပေါက် ကို ကြည့်လိုက်တော့ ရွာ့ဂုဏ်ဆောင် ကဘာဆြာကြီး အဘနီ (ခေါ်) နေဝန်းနီ ပါ။
ပါဝါ(၁၈) အဘနီ က လောလောဆယ် ပွိုင့်တစ်သိန်းပြည့် ထားသူပေါ့။
သူ ပျောက်မသွားပါ လို့ ဂတိပေးထားတာ။
ညဖက်မှာ ပေါက်ချလာတဲ့ ဧည့်ကောင်မလေး ဇာတ်လမ်းကလဲ တန်းလန်းနော်။
အဘနီ တစ်ယောက် ရွာထဲ ပို့စ်တင်ပြီး ခြေလှမ်းချတဲ့ နေ့ က Sep 25, 2010 ပါ။
၅နှစ် နီးပါး ရွာထဲမယ် ပျောက်လိုက် ပေါ်လိုက် နဲ့ စာပေါင်း ကဗျာပေါင်း ၄၁၄ ပုဒ် ကို ရေးခဲ့ သူပါ။
သူ့ ရဲ့ ပထမဆုံး က “ကံကောင်းတတ်ပါစေ(ကျွန်တော့အတွေးလေးပါ)” တဲ့။
လူတွေ ကိုစိမ်ခေါ်ပြီး မေးထားတဲ့ Post မှာ ဘယ်သူ မှ ဖြေမထားဘူး။
ဒီ ဆြာကြီး ရဲ့ ပထမဆုံး မှာ ပထမဆုံး မှတ်ချက် ပေးရတော့မယ်။
ဒါဟာ ကျွန်မ ရဲ့ ကိုယ်စွမ်းကိုယ်စ နဲ့ ရှာပြီး တွေ့ တဲ့ ပို့စ် လေး ကို ပြန်ဖော်ထုတ် နေတာလား။
မဲ ကျပြီး ရ သွားတဲ့ နံပါတ် အတိုင်း ဖြစ်ခဲ့တာလား။
ဒီ နံပါတ်တောင် မှ ဇီဇီ တင်လိုက် တဲ့ နံပါတ်။ ကိုယ့် နံပါတ် ဆို အဘ နီ မဟုတ်။ :-)))
ဒီအကြောင်း အရ ဆိုရင် လေ
အဘနီ ရေးခဲ့ သလိုဘဲ အတိတ် က စာလေးက အခု ပစ္စုပ္ပန် မှာ ပြန်ရောက်နေပြီ။
အနာဂတ် မှာ အတိတ် က အရာ တွေ ပြန်ပြန်ပေါ် တဲ့ သဘောပါဘဲ။
ကဲ ပိတ်သတ်ကြီး သူရေးတာ လေးဖတ်ပြီး ဝေဖန် ကြပါဦး။
သူ့ရဲ့ ဒုတိယ အပုဒ် Sep 25, 2010 မှာ “သစ်ပင်တွေပေါ်ကနာမယ်များ” ဆိုတဲ့ ကဗျာလေး ကလဲ ကောင်းလိုက်တာ။
ဒီလို အတွေးမျိုးတွေ ကို ရွာထဲ ခေါ်မလာတော့ ဘဲ ကျောခိုင်းမထွက်လိုက်ပါနဲ့ ပြောချင်ပါရဲ့။
တတိယ အပုဒ် Sep 26, 2010 မှာတင်လိုက်တာ က “ရပ်ကြည့်နေမလား?ဆက်လျှောက်သွားမလား?ပြုပြင်ယူမလား?” တဲ့။
ဒါဟာလဲ ဝင်ဆွေးနွေးဖို့ ကောင်းခဲ့လိုက်တာပါ။
မှတ်ချက် နှစ်ခု ကို ၁၀ လ လောက် ကြာမှ ရခဲ့တယ်။
လုံမ မွန်မွန် က စပေးလိုက်တာ။ နောက် ဆူး လဲ ဝင်ပေး တယ်။
အခုချိန် မှာ ဖြစ်နေတာ ကို အဲဒီတုန်းက ရေးထားတဲ့ ပို့စ် လေး နဲ့ ယှဉ်တွေး ရင် အတော်စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်း တဲ့ Study တစ်ခု ရလာမယ်။
အဲဒီ စာလေး ကို ကိုယ့်ဟာကို ပြန်ပြီး သုံးသပ် ဖို့ ကောင်းလှပါတယ် အဘနီ ရေ။
. ပြန်လာပြီး သုံးသပ်ပါဦး။
ကျွန်မ ကတော့ အဲဒီ အတွက် ရပ်မနေ ဘဲ ဆက်လျှောက်ပြီး ကြိုးစားပြီး ရနိုင်သလောက် ပြင်နေပါတယ်။
အဲဒီကနေ တစ်ရွေ့ရွေ့ လှမ်းလာတာ Jun 12, 2015 မှာ “ချိန်​ခွင်​လျှာ” တော့ ထိုး ပြ နေပါသေးတယ်။
ဒီတော့ ရွာထဲ မှာ အဘနီ ဆက်ရှိ နေပါသေးတယ် နော်။
ရွာအဝင် လည်နေတဲ့အဝိုင်း လေး လဲ တစ်နေ့တော့ မရှိသလောက် ပျောက်သွားနိုင်ကောင်းပါရဲ့။
အဲဒီအချိန် စာတွေ ပို တင်ဖို့ အခုထဲက အရှိန် ပြန်တင်ပါ လို့စ်။
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: ကိုလတ်ကြီးရေ
2010 ခုနှစ် ကျနော်တို့ မန္တေးလး ဂေဇက်မှာ စ ရေးခါစ က ၀င်သာဖတ်ကြတာ ကော်မင်းသိပ်ပေးလေ့မရှိပါဘူး။.
နောက်ပိုင်း မှ ကော်မင်းတွေအပြန်အလှန်ပေးလာကြတာ။
ကော်မင်းနဲ့ ပါတ်သက်လို့ ပြောရရင် ကိုယ့် ကို ပေးလာတဲ့ ကော်မင်း
တစ်ခုချင်းစီကို သေသေချာချာ ကော်မင်း ပြန်ပေး တဲ့ အလေ့အကျင့်ကောင်းကို
ရွာမှာ စ တင် ခဲ့ သူက တော့ ဘလက်ချော ပါဘဲ။
ဇီဇီခင်ဇော် says: ကဗျာ ရော
ရွာကို ကောင်းးသော ဘက် က သံယောဇဉ်ကြီးး တဲ့ အထဲမှာ အဘနီ ပါပါတယ်
Alinsett @ Maung Thura says: အဘနီကို ကဗျာဆရာအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုပါကြောင်းးး
.ရေးနိုင် တွေးနိုင် အား ကိုလည်း အားကျမိပါကြောင်းးး
Mike says: .ကိုနီကိုလေးစားပါတယ်…ဘ၀အတွေ့အကြုံလည်းအတော်စုံခဲ့သူပေပဲ…ကဗျာတွေလည်းခံစားလို့ရပါတယ်
naywoon ni says: ​ပျောက်​​နေတာ တစ်​ခြား မဟုတ်​ဘူးဗျို့ကျ​နော့ရွာထဲစီးစီးလာ​နေတဲ့ ယာဉ်​​လေးပျက်​သွားလို့ ( ဖုန်းကို​ပြောတာပါ ) ခု​တောင်​ဖွဘုတ်​မတ်​​စေ့ထဲ လင့်​​ပေးထားတာ​တွေ့လို့ဝင်​ကြည့်​ရင်း​တွေ့တာ ။ ဖုန်းနဲ့ ပတ်​သက်​လို့ နားလည်​သလို ပြန်​​ပြောပြချင်​တဲ့ ပို့စ်​​တွေ စိတ်​ကူးထဲ​တော့ ရှိတပဲ ။ ကဗျာ​တွေလည်း စိတ်​ကူးထဲမှာ ပြည့်​ကျပ်​​နေပါပြီ ။ ​နောက်​တစ်​ရက်​ နှစ်​ရက်​​လောက်​ဆို ကျ​နော့ ဖုန်း​လေးလည်း ​ဆေးရုံက ဆင်းခွင့်​ရ​တော့မှာပါ ။ အဲ့ဒိ​တော့မှ ရွာထဲက မထွက်​လို့ ​မောင်းမထုတ်​​ကြေး Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike LeaveaComment Cancel replyYou must be logged in to postacomment.	My Points	You need to be logged in to view your points.